Gabon: Manodidina ny fahafatesan’ny Filoha Omar Bongo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2009 7:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Nederlands, 日本語, bahasa Indonesia, English
Ny Alahady alina teo, ireo mpampahalala vaovao Frantsay dia samy nanambàra ny fahafatesan'i Omar Bongo filohan'i Gabon, izay nandany 41 tamin'ny 73 taona niainany teo amin'ny fitondràna. Ny gazety Frantsay Le Point nitatitra fa hoe nahazo vaovao momba ny fahafatesany ry zareo, vokatry ny homamiadana, tany aminà toeram-pitsaboana tsy miankina iray any Barselôna, avy amin'ny “loharano tena akaiky tokoa amin'ireo manodidina ny filoha”. Ny AFP, etsy andanin'izay, dia nitatitra loharanom-baovao iray avy amin'ny governemanta Frantsay. Saingy fotoana fohy taty aoriana dia niteny ny Praiminisitra Jean Eyeghe Ndong araka ny Fahitalavitra Gabone fa hoe “tena zendana tokoa” izy namaky ireo tatitra.
Vantany vao nampidirina tany amin'ny clinique Quirón any Barselôna i Omar Bongo tany amin'ny fiandohan'ny volana Mey, fanamarihana iray napetrak'i Akin tao amin'ny the African Loft no efa naminany ny fahafatesany lavitry ny vahoakany:
Ny tena zava-mahamenatra goavana indrindra tamin'ny fitondrany nandritry ny 42 taona dia i Gabon tsy mba nanana akory toeram-pitsaboana afaka hitsabo, na izy tenany, na ny vadiny.
Mba karazana fitondrana inona koa izany tsy afaka manome tombontsoa azo tsapain-tànana ho an'ny vahoakany izany, nefa ny mpitondra lasa mikopak'elatra mankany ivelany vantany vao misy olana ara-pahasalamana kely monja?
Io zava-mahamenatra io dia saiky ny mpitondra afrikana rehetra no tondroina ho mampihatra azy, tsy fahaizana manatsara foto-drafitrasa, ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fanomezana ainga vao.
Rahoviana isika rehetra no afaka hitaky fanazavana marina amin'ireo mpitondra rehetra nanao fitantanana tsy mahomby ?
[…] Ny lesona ara-moraly tsoahana amin'ity tantara ity dia tsy Afrikana mihitsy raha ny tranga misy no jerena, ny mpanjaka dia tsy mahazo miamboho ao an-dapany otronin'ireo vahoakany izay “nanompo” azy fa any amin'ny efitranon'ny toeram-pitsaboana tsy hay faritana any, ary otronin'ny vahiny.
Ny mpanjaka iray nandika ny fitsipiky ny fahamarinana sy ny fandehanana amin'ny fahitsiana dia ho faty any an-tany lavitra any, ao anaty henatra ary hampakàran'ny maro sentom-pitoniana lalina – Ipitsiho tany [‘ndeha mahazo any]! Ho azy rehetra mihitsy.
Rodrigue Kopgli mpitoraka blaogy Tôgôle, ao amin'ny Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique [Fr], dia miantso an'i Bongo ho “iray amin'ireo voaybe sisa tavela tamin'ny Françafrique“:
Sakaizan'ireo governemanta nifandimby hatramin'ny andron'i De Gaulle, Albert-Bernard Bongo, izay niova ho El Hadj Omar Bongo taty aoriana ary avy eo Ondimba (nitaky fiovana demokratika taminy ny vahoaka, ny fanovàny ny anarany manokana no natolony azy), dia tsy nitsahatra mihitsy nanohy ny maha-mpiasan'ny sampam-pitsikilovana frantsay azy hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana. Noho ny fahelàna velona sy ny harena nangonina nandritry ny fitondrana, ny Hadj dia afaka nidehaka nandray fanapahan-kevitra nanampy ara-bola ny fifidianana natao tany Frantsa, dia ny an'i François Mitterrant manokana araka izay nanoratan'i Pierre Péan azy tao amin'ny “Raharaha Afrikana”. Namela fananam-be goavana toy ny trano azy manokana any Frantsa koa izy sy kaontim-bola miafina izay hanjary fifalian'ireo paradisa ara-ketra izay mitazona azy ireny. Mandritra izany rehetra izany, ny vahoaka Gabône dia miaina tsy fahampiana lava izao. Miaraka amin'izany rehetra izany, tsy hisy hitomany azy mihitsy. Ary ireo Afrikana izay nolazainy fa nosoloiny tena koa tsy hisy hisaona azy.
Amin'ny filazàna ny zavatra efa nolalovan'i Tôgô, Kopgli dia miahiahy fa tsy hanova zavatra firy ny fahafatesan'i Bongo:
Tsy hitondra tombontsoa na kely akory aza ho an'ny vahoaka Gabône ny fahafatesan'i Bongo, satria ireo mpandova, Ali sy Pascaline Bongo dia samy efa tsara petraka sy tohanan'i Bolloré -namana akaikin'i Sarkozy- sy Christophe de Margerie avy amin'ny TotalFinaElf ary ireo lian-drà [vampires] hafa mba haka ny fahefana, toy izay nitranga tany Tôgô raha nampakàrina teo amin'ny fitondrana ireo zanak'i Gnassingbe tao anaty vesatry ny fanaovana an-keriny sy ny herisetra samihafa.
Théophile Kouamouo mpitoraka blaogy Ivoariana [Fr], izay miresaka koa an'i Tôgô, dia miresaka am-pahamalinana koa ny mety hitranga aorian'ny fahafatesan'i Bongo sady manontany tena momba ny hoavin'ny Françafrique:
Amin'izao fotoana tsy maha eo intsony ny “patriarka” izao, miditra aminà vaninandron'ny tsy fanànana fahatokisan-tena sy ny fametraham-panontaniana isika. Ho voahàja ve ny endrika manaraka ny Lalampanorenana – famindràna fahefana amin'ny Filohan'ny Antenimieran-doholona dia avy eo fifidianana-? Ho tonga amin'ny fifamonoan'ny mpirahalahy toy ny any Tôgô ve isika […]? Ny tafika Gabône ve, izay tsy tàzana mihitsy, hirotsaka an-tsehatra ve?
Lalindalina kokoa noho izay, inona no azo amehezana ny zava-bitan'i Omar Bongo Odinma? Aorian'ny fahafatesany, hihena hery ve ny Françafrique, izay izy no tena andriny? Amiko manokana, izay no hiseho – saingy mety ho lasa aloha ihany aho. Ity rafitra ity mantsy lasa mihodidina aminà olona vitsivitsy monja, tsiambaratelo kely madinidinika, aminà fitsipika arahana raha hiala ny sehatra izay efa tsy misy intsony, ka hoe haharitra mandrakizay. […]
Hihena ny herin'ny Françafrique, nefa hatanjaka ve ny demokrasia? Hiatrika samirery ny hoaviny i Afrika atsy ho atsy ary koa ireo fifanoherana misy ao amin'ny tantarany. Tsy hisy olona hanampy azy hamaha ireo fatotra. Saingy ‘ndeha aloha handrasantsika izay hiseho atsy Gabon ato anatin'ny andro vitsy ho avy.
Emmanuel Bellart avy any Cameroon [Fr] no naneho ny fahafaham-pony:
Misaotra an'Andriamanitra, iraha hafa indray no lasa ary manomboka miaina tsikelikelyi Afrika. Izany no nokatsahantsika rehetra mba hahafahan'i Afrika manokatra ny masony amin'ny farany. Ingahy Omar Bongo nandany41 taona teo amin'ny fitondrana, izay tena tsy araka ny tokony ho izy mihitsy, nasehony antsika hoe hatraiza ny hetahetan'ireny oloben'ny frantsay ireny amin'ny famotehana an'i Afrika. Tsy dia azo eritreretina loatra ny hoe hisy olona haniry ny hahafatesan'olona iray hafa, saingy amin'ny lafiny iray dia rivo-baovao ho an'ny vahoaka Gabône izy ity, ny fandrindràna ny fitondram-panjakana no zavatra tokony ho nataon'ingahy Bongo fa tsy ny fanomanana izany holovain'ny taranany[…]
Veloma mandrakizay ry loholona [mpanao didy jadona], avelao ny fahefana ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'olon-tokana, rehefa manao ampihi-mamba ny fahefana ianao ary maty dia ho adinonay.
Ao amin'ny vavahadim-baovao Gaboneco [Fr], mpamaky iray, Ogwer, Gabône no nametraka fanamarihana mangataka fifidianana demokratika:
Teratany Gabône aho ary mitaky fifidianana manaraka tanteraka izay voalazan'ny lalampanorenan'ny Repoblika!!! ary tsia no havaliko an'ireo miantso an'i Frantsa hijabajabaka amin'ny pôlitika Gabône, indrindra indrindra fa i Ben Mouamba manokana izay tsy fantatray akory ary mety ho vatom-panoron'i Frantsa koa aza! Mila miray hina ny Gabône ary tsy maintsy mailo fatratra!